यसरी जिन्दगी चल्छ ! मिलेसम्म रिलेसन, नभए साइबर अपराध | Rato Kalam
यसरी जिन्दगी चल्छ ! मिलेसम्म रिलेसन, नभए साइबर अपराध
काठमाडौं । महानगरीय अपराध महाशाखामा गत साता उजुरी लिएर एक किशोरी पुगिन् । लिभिङ टुगेदरमा बसेका युवाले पुराना भिडियोलाई लिएर ‘ब्ल्याकमेलिङ’ गरिरहेको उनले सुनाइन् ।
उजुरी गर्न आउने पीडितमा सबैभन्दा बढी २० देखि ३० वर्ष उमेरका युवायुवती छन् । १ हजार ७ सय ४० मध्ये ३९।९२ प्रतिशत अर्थात् ८ सय ९ उजुरी यही उमेर समूहकाले दिएका छन् । त्यसपछि ३० देखि ४० वर्षका व्यक्ति साइबरका उजुरी लिएर महाशाखा पुग्ने गरेका छन् । सबैभन्दा कम ४० देखि ६० वर्ष उमेरका व्यक्ति पीडित देखिएका छन् ।
‘फेसबुक र युट्युबले धेरै विकृति ल्याए । गोपनीयता भन्ने रहेन’, महाशाखा प्रमुख एसएसपी सहकुल थापा भन्छन्, ‘जसलाई जे मन लाग्यो त्यही फेसबुकमा पोस्ट गरिदिने प्रवृत्ति बस्यो ।’ उनका अनुसार किशोरकिशोरीमा देखिएको मोबाइलको लतले साइबर उजुरी आउने क्रम बढेको छ । ‘ फेसबुकमा साथी बन्यो । भेट्यो । सँगै पनि बस्यो । पछि के कुरामा चित्त बुझ्दैन अनि अश्लील फोटो पठायो’, उनी भन्छन्, ‘प्रहरीमा रीतपूर्वकको जाहेरी आएपछि अनुसन्धान गर्नै पर्‍यो । अधिकांश घटनाको निष्कर्षमा केटाकेटी दुवैको गल्ती देखिन्छ ।’ समयमै सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न नसके यसले धेरै विकृति ल्याउने उनको बुझाइ छ । अन्नपूर्णबाट ।
‘महाधिवेशन आओस् न, हामी देखाईदिन्छौं’